Dataset များ (389)
မြန်မာ (2509) ထိုင််း (773) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (772) ဗီယက်နမ် (769) ကမ္ဘောဒီးယား (765) တရုတ် (364) ဖိလစ်ပိုင် (249) အင်ဒိုနီးရှား (247) မလေးရှား (241) စင်္ကာပူ (230) ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင် (226) တီမော လက်စ်တေ (155) ကိုကိုး (ကီးလင်း) က... (144) ခရစ္စမတ်ကျွန်း (144) အိနိ္ဒယ (130) သီရိလင်္ကာ (120) ဂျပန် (118) မွန်ဂိုးလီးယား (118) ဟောင်ကောင် (114) ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်... (114) ကိုရီးယားသမ္မတနိင်ငံ (114) ဘင်္ဂလားဒေရှ် (7) မဲခေါင် (7) နီပေါ (7) ဘူတန် (6) မေ်ာလ်ဒိဗိ (6) အာဖဂန်နစ္စတန် (5) ဩစတေးလျ (5) ကွတ်ကျွန်း (5) မိုက်ခရိုးနီးရှား ဖ... (5) အီရန် အစ္စလာမ်မစ်သမ... (5) ကီဂျစ်စတန် (5) ကီရီဘာတီ (5) ကာဇက်စ်တန် (5) မာရှယ်ကျွန်း (5) နယူးဇီလန် (5) ပါကစ္စတန် (5) ပလော (5) တာဂျစ်စတန် (5) တာဂမန်နစ်စတန် (5) ထွန်းဂ (5) အူဘက်ကစ်စတန် (5) ဆာမိုအာ (5) အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆာမ... (4) Global (4) ဂူအန် (4) ဟာဒ်ကျွန်းနှင့် အမ်... (4) မကာအို (4) မြောက်မာရီယားနား (4) နော်ဖော့ခ် ကျွန်း (4)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (1728) ဗမာဘာသာစကား (1052) ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား (12) ခမာဘာသာစကား (6) လာအို (5) ထိုင်း (4) တရုတ် (4) English (2) ပြင်သစ် (2) Karen (1)
PDF (1936) CSV (229) XLSX (174) HTML (172) TXT (125) WMS (66) DB_TABLE (40) SHP (35) ZIP (28) XLS (27) GeoJSON (21) XML (21) JSON (19) mrc (19) webpage (19) JPEG (16) URL (14) KML (10) DOC (8) GeoTIFF (7) DOCX (6) geotiff (5) sqlite (4) JPG (3) PNG (3) PPTX (3) PPT (2) .pdf (1) Archived Webpage (1) ESRI Grid (1) google drive (1) ODT (1) QML (1) raster (1) stata (1) TIFF (1) TSV (1)
Open Development My... (1455) Open Development Me... (690) The Asia Foundation (127) Voices for Mekong F... (86) ADB (47) Open Development Ca... (40) Open Development Vi... (21) MRLG (11) Open Development Laos (11) Asian Indigenous Pe... (6) Village Focus Inter... (6) GIZ (4) SEI (3) ADPC and SERVIR-Mekong (1) Open Development Th... (1)
လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတ... (420) လူဦးရေနှင့် သန်းခေါ... (400) လူဦးရေ (381) အုပ်ချုပ်ရေး (325) အစိုးရ (282) ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထ... (259) အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်... (240) အစိုးရစနစ် (240) ကပ်ရောဂါ (152) ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့... (151) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (108) သစ်တောမူဝါဒ နှင့် အ... (95) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (90) Sustainable develop... (86) စီးပွါးရေးနှင့် ကုန... (82) တိုင်းရင်းသားလူနည်း... (82) သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း နှ... (78) ရေအရင်းအမြစ်များ (75) မြေယာ (69) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင... (67) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ... (64) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (64) အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ (57) စွမ်းအင် (56) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (56) ကုန်သွယ်ရေး (55) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (52) စိုက်ပျိုးရေး (49) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှ... (46) လူ့အခွင့်အရေး (45) အခြေခံအဆောက်အဦများ (45) သစ်တောများ နှင့် သစ... (43) ရွေးကောက်ပွဲများ (42) သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်... (41) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိ... (40) ဇီဝမျိုးကွဲများ (39) စီးပွါးရေးဆိုင်ရာမူ... (37) မြေအောက်သယံဇာတ ထုတ်... (36) စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်... (35) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု (34) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (32) လမ်း၊ တံတားများ (31) မြေယာနှင့်ဆိုင်သော ... (30) မြစ်ချောင်းများ နှင... (29) ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်င... (28) Deforestation drivers (26) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင... (26) နိုင်ငံခြားသား ရင်း... (26) ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအ... (26) အလုပ်သမား (26)
unspecified (1200) Creative Commons At... (500) License not specified (351) CC-BY-4.0 (151) CC-BY-3.0-IGO (119) Creative Commons At... (83) CC-BY-SA-4.0 (26) Other (Public Domain) (16) CC-BY-NC-4.0 (9) CC-BY-SA-3.0-IGO (9) CC-BY-NC-ND-4.0 (5) Creative Commons No... (5) Attribution-NonComm... (4) CC-BY-NC-SA-3.0 (4) Other (Open) (4) CC0-1.0 (3) Other (Attribution) (3) CC-BY-ND-4.0 (2) CC-BY-NC (1) Creative Commons CC... (1) FAL (1) ODC-BY-1.0 (1) Open Data Commons O... (1)
Order by သင့်လျော်မှု Name Ascending Name Descending Last Modified
2,509 datasets found
OpenStreetMap geometry ကို အခြေခံထားသော၊ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ [မြို့နယ်/ ခရိုင်/ ပြည်နယ်-တိုင်းဒေသကြီး] စီမံအုပ်ချုပ်ရေးနယ်နိမိတ်များ
မြန်မာ 2022၊ 23 ဇွန် ရင်းမြစ်: OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org/) အုပ်ချုပ်ရေး
OpenStreetMap geometryကို အခြေခံထားသော၊ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ [မြို့နယ်/ ခရိုင်/ ပြည်နယ်-တိုင်းဒေသကြီး] စီမံအုပ်ချုပ်ရေးနယ်နိမိတ်များ အချက်အလက်အစုသည် ၂၀၂...
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားအဆင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု လျှော့ချရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရေးဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် (၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်)
မြန်မာ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Environmental Conservation Department and other Departments of... 2021 ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု, လျော့ပါးသက်သာစေခြင်း, သင့်လျော်အောင် စီစဉ်ညှိယူမွေးစားမှု
မြန်မာနိုင်ငံသည် ရာသီဥတုလျှော့ချရေးနှင့် နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိစေရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်မှုနယ်ပယ် နှစ်ခုစလုံးတွင် ကနဦးအစီရင်ခံစာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမို ခိုင်မာ၍ အသေးစိတ်ကျသေ...
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2022၊9ဖေဖော်ဝါရီ ရင်းမြစ်: Greater Mekong Dams Observatory... ရေအရင်းအမြစ်များ, ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည်များ, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
dataset တွင် မည်သည့်ဖော်ပြမှုမှ မပါရှပါ
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2022၊ 28 ဖေဖော်ဝါရီ ရင်းမြစ်: Patrinos and Angrist (2018). ... ပညာသင်ကြားနိုင်မှု
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2022၊ 19 ဖေဖော်ဝါရီ ရင်းမြစ်: The World Database on Protected Areas (www.protectedplanet.net) ကာကွယ် သစ်တောများ, ကြိုးဝိုင်းဧရိယာများ, ဇီဝမျိုးကွဲများ, သစ်တောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2022၊ 19 ဖေဖော်ဝါရီ ရင်းမြစ်: OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org/) ဆေးရုံနှင့် ဆေးခန်းများ, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး
ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင်, ကမ္ဘောဒီးယား, အင်ဒိုနီးရှား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မလေးရှား, မြန်မာ, ဖိလစ်ပိုင်, စင်္ကာပူ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် အာဆီယံ သဘောတူညီချက်များ 2000၊ 25 နိုဝင်ဘာ စီးပွါးရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး, နည်းပညာများ, ပွင့်လင်းနည်းပညာများ, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး
For the purposes of this Agreement the following terms shall, unless the context otherwise requires, have the meanings indicated below: (a) “Information and Communications...
အာဖဂန်နစ္စတန်, အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆာမိုအာ, ဩစတေးလျ, ဘင်္ဂလားဒေရှ်, ဘူတန်, ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင်, ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, ခရစ္စမတ်ကျွန်း, ကိုကိုး (ကီးလင်း) ကျွန်း, ကွတ်ကျွန်း, ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား, ဂူအန်, ဟာဒ်ကျွန်းနှင့် အမ်စီဒေါ်နယ်ကျွန်း, ဟောင်ကောင်, အိနိ္ဒယ, အင်ဒိုနီးရှား, အီရန် အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ, ဂျပန်, ကာဇက်စ်တန်, ကီရီဘာတီ, ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ, ကိုရီးယားသမ္မတနိင်ငံ, ကီဂျစ်စတန်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မကာအို, မလေးရှား, မေ်ာလ်ဒိဗိ, မာရှယ်ကျွန်း, မိုက်ခရိုးနီးရှား ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု, မွန်ဂိုးလီးယား, မြန်မာ, နော််ရူး, နီပေါ, နယူးဇီလန်, နိယူအဲ, နော်ဖော့ခ် ကျွန်း, မြောက်မာရီယားနား, ပါကစ္စတန်, ပလော, ဖိလစ်ပိုင်, ပစ်ကာရန်, ဆာမိုအာ, စင်္ကာပူ, သီရိလင်္ကာ, ထိုင်ဝမ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ပြည်နယ်, တာဂျစ်စတန်, ထိုင််း, တီမော လက်စ်တေ, တိုးကဲလော့, ထွန်းဂ, တာဂမန်နစ်စတန်, ထူးဗားလု, အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝေးလံသောကျွန်းငယ်များ, အူဘက်ကစ်စတန်, ဗီယက်နမ်, ဝေါလစ်နှင့် ဖျူကျူးနား A/RES/74/4 Resolution 2019၊ 21 အောက်တိုဘာ ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ်
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2022၊ 15 ဖေဖော်ဝါရီ ရင်းမြစ်: Ocean Data Viewer (https://data.unep-wcmc.org/datasets/44) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2022၊ 15 ဖေဖော်ဝါရီ ရင်းမြစ်: World map of the major hydrological basins (Derived from... စိုက်ပျိုးရေး, စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း, မြစ်ချောင်းများ နှင့် ရေကန်များ, မြေအောက်ရေ, ရေအရင်းအမြစ်များ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2022၊ 15 ဖေဖော်ဝါရီ ရင်းမြစ်: Sources vary data from Myanmar, Laos, Thailand and China come... စွမ်းအင်, ရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း, ရေအရင်းအမြစ်များ, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦ, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2022၊ 10 ဖေဖော်ဝါရီ ရင်းမြစ်: The Library of Congress101 Independence Ave, SEWashington, DC... သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2022၊ 10 ဖေဖော်ဝါရီ ရင်းမြစ်: LANCE FIRMS operated by the NASA/GSFC/Earth Science Data and... မိုးခေါင်ရေရှားမှု, မီးလောင်ကျွမ်းမှုများ
ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, အင်ဒိုနီးရှား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မလေးရှား, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2022၊ 10 ဖေဖော်ဝါရီ ရင်းမြစ်: Sentinel-5P:... လေထုညစ်ညမ်းမှု
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် Conference/workshop proceedings and presentations Open Development Mekong and national team members 2021 ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် Analysis, discussion papers, and blogs Emilie Pradichit, Manushya Foundation – Cambodia, Lao PDR,... 2021 ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့်ဆက်ဆိုင်သော မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, လူ့အခွင့်အရေး, လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အင်တာနက်
ဤဆောင်းပါးသည် IEHRD များအတွက် အထူးအလေးထား၍ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီး မဲခေါင်ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၏ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့် ၎င်းအား အသုံးချမှုများအပေါ် ထိန်းချုပ်ထားသော တည်ဆဲဥပဒေမူဘော...
New Species Discoveries in 2020 in the Greater Mekong
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မဲခေါင်, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Research by Antonio Cerezo Tomàs, WWF-Greater Mekong, Text and... 2021 ဇီဝမျိုးကွဲများ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ, အမျိုးသား ဥယျာဉ်များနှင့် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် ဘေးမဲ့တောများ
The Greater Mekong region is one of planet Earth’s most important biodiversity hotspots, highlighted by the endless number of new species discovered there every year. The...
ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2022၊9ဖေဖော်ဝါရီ ရင်းမြစ်: Greater Mekong Subregion Atlas of the Environment (2nd Edition).... လေဆိပ်များ နှင့် လေကြောင်းခရီးသွားခြင်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦနှင့် အထောက်အပံ့များ, အခြေခံအဆောက်အဦများ
ဤအရာနှင့် Open Development Mekong မှထုတ်လုပ်သော၊ ထုတ်ဝေသော မည့်သည့်အကြောင်းအရာမဆို CC BY-SA 4.0 ၏အောက်တွင်မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ရင်းမြစ်အသီးသီး၏ fair-use နည်းဥပဒေများနှင့် မူပိုင်ခွင့်များအတိုင်း သတင်းဆောင်းပါးများကို ၎င်းတို့၏ ရင်းမြစ်များမှထုတ်ယူထားသည်။ Open Development Mekong (ODM) website တွင်တင်ထားသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပူးတွဲပါဝင်သည့် database များသည် အများသူငါ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်သောစာတမ်းများဖြစ်ပြီး အခကြေးငွေမယူပဲ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အထွေထွေအသုံးချမှုအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ မည်သည့်အစိုးရတစ်ရပ် သို့မဟုတ် အစိုးရတွင်း အေဂျင်စီတစ်ရပ်မှ စီးပွါးဖြစ်လုပ်ဆောင်နေသော သုတသနဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် domain မဟုတ်ချေ။ ဤသည်မှာ အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သည့် အစိုးရမဟုတ်သော data/open ဗဟုသုတမီဒီယာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို ဂရုတစိုက် လေ့လာအတည်ပြုစစ်ဆေးပြီးမှသာ အများသူငါ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်တင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ODM အနေဖြင့် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို တတိယ ရင်းမြစ်များ၏ တိကျမှု၊ ပြီးပြည့်စုံမှု သို့မဟုတ် သင့်တင့်လျောက်ပတ်မှုတို့အတွက် အာမ မခံပါ။ ဤနေရာတွင်ရှိနေသော သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ပေးထားသော အချက်အလက်များ၊ materials သို့မဟုတ် စာတမ်းများကို ဖော်ပြမှု သို့မဟုတ် အသုံးချမှုတို့အတွက် အချက်အလက်အားဖြင့် သို့မဟုတ် ဥပဒေအားဖြင့် တိကျမှု၊ ပြီးပြည့်စုံမှု သို့မဟုတ် သင့်တင့်လျောက်ပတ်မှုတို့ကို ODM မှ ကိုယ်စားမပြုပါ သို့မဟုတ် အာမ မခံပါ။ Site ကိုအသုံးပြုသူများကိုလည်း ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို အထောက်အကူပြုရန်အတွက် သုတေသနများထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ သုတေသနများထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ပြီး ဤ site ၏ တိကျသေချာမှုကို ပိုမိုတိုးတက်စေမည်ဖြစ်သည်။ODM website သို့မဟုတ် database ကိုရယူခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဤ site မှထောက်ပံ့ထားသော သတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် တာဝန်ယူပြီး အသုံးပြုမှုကြောင့် တစ်ဦးချင်းစီ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပုံစံနှင့် အကြောင်းအရာများဆုံးရှုံးမှု၊အန္တရာယ် ဖြစ်စေမှု သို့မဟုတ် ပျက်ဆီးစေမှုတို့မဖြစ်အောင် အသုံးပြုရမည်။
ODM website သို့မဟုတ် database ကိုရယူခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဤ site မှထောက်ပံ့ထားသော သတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် တာဝန်ယူပြီး အသုံးပြုမှုကြောင့် တစ်ဦးချင်းစီ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပုံစံနှင့် အကြောင်းအရာများဆုံးရှုံးမှု၊အန္တရာယ် ဖြစ်စေမှု သို့မဟုတ် ပျက်ဆီးစေမှုတို့မဖြစ်အောင် အသုံးပြုရမည်။